Argentina iyo Belgium oo soo baxay – LaacibOnline
Argentina iyo Belgium oo soo baxay
Ciyaaryahan Di Maria oo u dabaaldegaya goolkii uu ka dhaliyay kooxda Switzerland
Argentina iyo Belgium ayaa u soo gudbay wareega rubac dhamaadka ee koobka adduunka kaddib markii ay ciyaaro xiiso badan la kala yeesheen wadammada Switzerland iyo Mareykanka.
Labada ciyaarba waxa ay isla gaareen kooxuhu waqti dheeri ah, balse islama aanay gaarin gool ku laad, oo Argentina waxa ay 1-0 kaga badisay Switzerland, halka Belgium-kana uu ku reebay Mareykanka 2-1.
Gool uu dhaliyay waqtiga dheeri ah ee lagu daray ciyaarta ciyaaryahan Angel Di Maria ayaa Argentina u sahlay inay u gudbaan rubac dhamaadka koobka adduunka, kaddib ciyaar aan la jeclaysan oo ay kooxda Argentina kala hortageen kooxda Switzerland.
Ciyaaryahanada Argentina oo dabaalgeyaga markii ay dhamaatay ciyaarta kaddib, iyo kuwa Switzerland oo niyad jabsan
Kooxdan ku guulaysatay koobka adduunka labada jeer ayaa kubad haysiga ciyaarta maamulaysay, hasayeeshee uma aanay suurtagalin inay ka gudbaan difaaca ay dhigteen xulka Switzerland ilaa xille dambe uu Di Maria gool u badalay banooni si xirfadeysan oo uu soo dhigay ciyaaryahan Lionel Messi.
Ciyaaryahanka garabka kaga dheela kooxda Real Madrid ayaa khasaariyay kubado badan intii ay ciyaarta socotay balse waxa uu ugu dambeyntii dhaliyay gool ay aad ugu baahneyd kooxdiisa.
Ciyaarta ayaa waqtigii loogu talagalay waxa ay ku dhamaatay 0-0, waxaa lagu daray 30 daqiiqo oo dheeri ah, 2 daqiiqo oo kaliya markii ay ka harsan tahayna ciyaaryahan Di Maria ayaa xulkiisa Argentina gool u dhaliyay.
Ciyaaryahan Lionel Messi oo dhiibaya baaskii uu goolka u badalay ciyaaryahan Di Maria
Argentina ayaa guulaysatay 6 ciyaar oo ka mid ah 7 ciyaar oo ka tirsan koobka adduunka oo ciyaarta la isla aaday waqtiga dheeriga ah.
Switzerland ayaa ku guuldaraysatay in ay wax gool ah dhaliso saddexdii ciyaar ee ugu dambeysay ee heerka kala baxa ee koobka adduunka, markii ugu dambaysay ee ay gool dhaliyaana ciyaaraha kala baxana waxa ay aheyd 1954-tii.
Argentina ayaa ku guul dareysatay in ay soo bandhigto ciyaaro wanaagsan intii ay socdeen ciyaarihii guruubyada, hasayeeshee waxaa meel uga soo baxay weeraryahankooda Lionel Messi oo goolal uu u dhaliyay ay kaga soo gudbeen kooxaha Bosnia-Hercegovina, Iiraan iyo Nigeria.
Taageerayaasha xulka Argentina oo dabaaldegaya kaddib markii ay gool ka dhaliyeen xulka Switzerland
Qiyaastii ku dhawaad 40,000 oo taageerayaal xulka Argentina ah ayaa ku sugnaa garoonka Arena de Sao Paulo, goolka uu xilliga dambe dhaliyay Di Maria-na waxa uu horseeday dabaaldegyo iyo mashxarad kulmisay ciyaartoyda iyo taageerayaasha.
Balse taasi waxa ay niyad jab iyo walaac ku reebtay kooxda Switzerland gaar ahaan tababarhooda rug cadaaga ah ee Ottmar Hitzfeld, oo muddo 31 sano uu tababar ku sameynayay xirfada kubadda cagta ay ku soo gebagebowday qaab aan wanaagsaneyn.
Ottmar Hitzfeld, tababaraha xulka qaranka Switzerland
65 jirkan u dhashay waddanka Jarmalka ee laba jeer oo hore loo doortay tababaraha ugu wanaagsan kubadda cagta adduunka, ayaa ka fariisanaya ciyaaraha kaddib markii uu u qaaday 19 koob kooxaha Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo Grasshoppers.
Dhanka kale ciyaartii dhexmartay xulalka Belgium-ka iyo Mareykanka ayaa waxaa lagu kala baxay waqtiga dheeriga ah.
Jiilka casriga dahabiga ah ee ciyaartoyda Belgium-ka ayaa helay fursad ay ku gaari karaan rubac dhamaadka koobka adduunka markii ugu horreysay muddo 28 sano ah, kaddib guul ay ka gaareen xulka Mareykanka waqtiga dheeriga ah ee lagu daray ciyaarta.
Tanina waxa ay u aheyd Belgium-ka waqti aad u wanaagsan, waxayna gaareen guul ay u qalmeen inkastoo qeybii dambe ee ciyaarta uu Mareykanka soo bandhigay ciyaar qalqal galisay kooxda.
Kevin de Bruyne oo u dabaaldegaya goolka uu ka dhaliyay Mareykanka
Ciyaarta oo waqtigii loogu talagalay ku dhamaatay 0-0, ayaa daqiiqadii labaad ee waqtiga dheeriga ah ee lagu daray waxaa difaaca Mareykanka daba maray oo gool ka dhaliyay Kevin de Bruyne, goolka labaadna waxaa daqiiqadii 11-aad ee isla waqtiga dheeriga u raaciyay ciyaaryahanka badalka ku soo galay ee Romelu Lukaku, goolkaas oo u muuqday in ciyaarta uu dhinac u riday.
Mareykanka ayaa rajada waxaa u soo celiyay ciyaaryahanka da’da yar ee badalka ku soo galay ciyaarta ee Julian Green, kaddib markii uu gool u dhaliyay xulkiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Obama iyo howlwadeenada Aqalka Cad oo ciyaarta Belgium-ka iyo Mareykanka ku daawanaya qeyb ka mid ah Aqalka Cad
Goolhayaha Mareykanka Tim Howard ayaa sameeyay rikoor cusub kaddib markii uu goosha ka badbaadiyay 16 fursadood oo gool u muuqday, iyadoo intii u dhaxeysay 1966-dii ilaa iyo tartankan aanu jirin goolhaye sidaa sameeyay hal ciyaar taariikhda koobka adduunka.
4 gool oo ka mid ah lixda gool ee ay kooxda Belgium-ka dhalisay tartanka sanadkan waxaa u dhaliyay ciyaaryahano badal ku soo galay ciyaarta.
Belgium-ka ayaa Sabtida magaalada Brasilia waxa ay rubac dhamaadka koobka adduunka kula dheeli doonaan xulka Argentina.
← Axad, Nov 22, 2020-Warkii ugu dambeeyay ee COVID-19 ee MN
Belgium iyo Argentina oo u gudbay rubac dhamaadka →
Stoke oo ka naxsatay Manchester City
Koobka Adduunka Brazil 2014